PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2019-01-06 - URonaldo usazidlela amahlanga emiklomelweni yomhlaba
URonaldo usazidlela amahlanga emiklomelweni yomhlaba
Isolezwe ngeSonto - 2019-01-06 - EZEMIDLALO - NHLANHLA SITHOLE
ISIHLABANI seJuventus nePortugal uChristiano Ronaldo, sisalokhu siqhubekile nokubeka induku ebandla nokuqonela abanye ozakwabo ngokuzidlela amahlanga emiklomelweni esenza sibe ngumdlali ohamba phambili emhlabeni.
URonaldo uqale kahle unyaka ka-2019 ngokuqokwa njengomdlali ovelele kwiGlobe Soccer Awards emcimbini obuse-Abu Dhabi, e-United Arab Emirates.
Ngonyaka odlule benembangi yakhe uLionel Messi babhuquziswe ngoLuka Modric, Raphael Varane noKylian Mbappe kwiFIFA Ballon d’Or, behluleka ukufinyelela emzuliswaneni wabadlali abathathu bokugcina.
UModric nguyena owagcina edle umhlanganiso ekhipha inkani uVarane noMbappe.
Nokumakunjalo kodwa lomdlali ongukaputeni weqembu lasePortugal kuthe kungakapholi maseko waphinda waqhamuka kwiBest Player nod kwi-Globe Soccer Awards.
Lapha ube qhuthana amakhizane nomgadli we-Athletico Madrid, u-Antoine Griezmann nowe- Paris SaintGermain uKylian Mbappe.
Bese kungokwesithathu kulandelana ehlabana ngalo mklomelo emahlandleni amahlanu kusukela ngo 2011.
Ngesizini edlule uRonaldo neReal Madrid bashanela yonke imiklomelo yena ethatha owokuba ngumdlali ovelele, uZinedine Zidane edla umhlanganiso kowo mqeqeshi ovelele neqembu lakhe iMadrid owokuba yiqembu livelele.
Lo mdlali oseke wahlabana ngeBalon d’Or iphinde wahlabana ngomklomelo weFans’ Award kuwona lomcimbi obuse-United Arab Emirates.
“Ayikhon enye indlela yokuqala unyaka omusha ngaphandle kwale. Ngiyabonga ukuhlonishwa nokunakekelwa engikuthole namhlanje,” kusho uRonaldo embikweni we-Instagram lapho ubuhambisana nesithombe semenenja yakhe uJorge Mendes, oklonyeliswe ngokuba yi-Agent yonyaka.
Khonamanjalo, inkakha yaseArgentina kunobhutshuzwayo Argentina uDiego Maradona isikhululwe esibhedlela ngemuva kokungeniswa ehlushwa ukopha ngaphakathi esiswini, ngokusho kwendodakazi yayo.
“Kulabo abebephatheke kabi ngempilo kababa ngingasho ukuthi usengcono,” kusho indodakazi yakhe uDalma.
UMGADLI weJuventus uCristian Ronaldo oqokwe njengomdlali wonyaka kumaGlobe Awards abeseAbu Dhabi Isithombe: BACKPAGEPIX
UTHEMBI Kgatlana othwelwe ngeqoma ukuthi uzokhala emuke nesicoco somdlali ohambe phambili wesifazane kanjalo noshaye ingcwenga yegoli kwiAfrican Womens Cup of Nations